UMEYA waseMandeni ugqugquzela ukudlalwa kweKarate – SIVUBELAINTUTHUKO
UMEYA waseMandeni ugqugquzela ukudlalwa kweKarate
IMEYA yoMkhandlu waseMandeni enyakatho yeKwaZulu Natal, uKhansela Thabani Mdlalose ugqugquzela kakhulu abantu abasha bakule ndawo ukuthi bangazitheIi ngabandayo kodwa bazijwayeze ukuzibandakanya nomdlalo wekarate.
UMeya walo Mkhandlu uchaze ukarate njengeminye yemidlalo emqoka kakhulu okufanele kubonakale abantu abasha beyidlala njengeminye.
Abantu abasha bakule ndawo bebephume ngobuningi bezozibandakanya nalo mqhudelwano obonakale uba nesasasa elikhulu kulo mphakathi. Umqhudelswano ubukade uqhubeka ehholo lomphakathi lakhona eMandeni, iSibusisiwe Hall.
UMeya uKhansela uMdlalose naye owake wayidlala ikarate unxuse abantu abasha abaningi bakule ndawo ukuthi baqale manje bakhombise ukuzimisela ngalolu hlobo lomdlalo aluchaze njengolubalulekile futhi oluhlukile kakhulu kweminye imidlalo.
“Mina ngikholwa ukuthi umdlalo wekarate ungaba yinto nkulu kakhulu ngaphezulu nje komdlalo. Kuningi kakhulu okufundwayo emdlalweni kakarate okungabakhulisa abadlali balo mdlalo,’’usho kanjena.
Eqhuba uKhansela uMdlaose uthe ufundisa abadlali bawo indlela yokuziphatha, indlela yokuzivikela, ukuhlakanipha kanye nendlela yokuzithuthukisa kanye nokubaluleka kokuzimela empilweni.
UKhansela uMdlalose uthe akangabazi nje nakancane ukuthi likhulu ithalente kubantu abasha baseMandeni abadlala ikarate. Uthe yingakhoke ebanxusa futhi ebagqugquzela ukuthi bazijwayeze ukuzibandakanya nawo.
Ukhansela uMdlalose uzwakalise ukuthakasa kwakhe ngendlela nje lo mqhudelwano ohambe ngakhona nangendlela obonakale uba nesasasa ngakhona.
“Ngijabule kakhulu ngendlela lo mqhudelwano ohambe ngakhona kuningi kakhulu okuhle engikubonile kwenzeka. Kuyangijabulisa futhi kakhulu ukubona abantu abasha bethu sebeqala manje bewujabulela umdlalo wekarate.Angingabazi nje nakancane ukuthi gokuhamba kwesikhathi sizokwanda isibalo sabantu abasha abawuthandayo lo mdlalo,’’usho kanjena.
MAGAYE CELE SEKUQINISEKISIWE ukuthi uyabuya kulo nyaka ka-2022 umjaho omkhulukazi ohlanganisa abasubathi basezwenikazi i-Afrika kanjalo nabasemhlabeni nje jikelele, iCommrades Marathon. IComrades Marathon ebanjelwa eNingizimu Afrika minyaka yonke kuzokhumbuleka ukuthi ibalwa neminye yemijaho emikhulukazi nehlonishwayo kakhulu. Ngokujwayelekile yaziwa kakhulu ngokuhlanganisa abasubathi beqophelo eliphezulu basezwenikazi i-Afrika kanjalo nasemhlabeni nje jikelele. AbeComrades Marathon Association sebekuqinisekisile ukuthi lo mjaho […]
MAGAYE CELE INHLANGANO eyengamele ibhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association (Safa), ithi kulokoza inhlansi yethemba mayelana nokubuya kwabalandeli ezinkundleni zezemidlalo kuleli. Le nhlangano ithi ikholwa ukuthi sesifikile manje isikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo mayelana nalesi simo. Kwisitatimende esithunyelwe yile nhlangano iveza ukuthi izokwenza konke okusemandleni ayo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi siyabuyekezwa isinqumo esathathwa mayelana […]
LIBAMBE UFISHI OMKHULU IQEMBU LASETHEKWINI LIKAMAMKHIZE
UTHABO Mathlaba osesayine neqembu laseThekwini, iRoyal Am. MAGAYE CELE IBAMBE ufishi omkhulu iRoyal AM, okuyiqembu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal eligijima ngaphansi kwesigaba esiphezulu nesihlonishwayo saseNingizimu Afrika, iDST Premeir Soccer league. Leli qembu elilolongwa nguJohn Maduka nelibukeka lidlala kahle kakhulu selokhu lingenile kulesi sigaba lithenge uThabo Matlaba ongumdlali onamava nobalwa nabanye abadlali abambalwa abanesipiliyoni esikhulu sokugijima esigabeni […]
UMASHABA UGXEKA UKUBUTHELANA KWABADLALI ASEBEKHULILE KWI-ABC￼